बजेटको मिति सार्नु अर्थतन्त्रमाथि कै जघन्य अपराध हो - Karobar National Economic Daily
बजेटको मिति सार्नु अर्थतन्त्रमाथि कै जघन्य अपराध हो
query_builderMay 2, 2017 11:06 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1212
केशव आचार्य बरिष्ठ अर्थशास्त्री ।
निर्वाचन आयोगले दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु आचारसंहिता विपरित हुने बताएपछि जेठ १५ गते बजेट आउने विषयमा अन्योल देखिएको छ ।
बजेट ल्याउने मिति संविधानमै तोक्नुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका वरिष्ठ अर्थविद् केशव आचार्य भने अहिले आएर राजनीतिक दलहरूले बजेटको मिति सार्ने कुरा गर्नुलाई अपराध भन्छन् । पहिलो पटक संघीय बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय पनि अन्योलमा देखिन्छ ।
त्यसैले बजेटको अन्योलताले मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर पर्ने आचार्य बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मौजा ठानेको बताउने उनी कुनै पनि हालतमा बजेटको मिति सार्न नहुने तर्क राख्छन् ।
विभिन्न समयमा अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गरिसकेका उनीसँग लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत बसेर काम गरेको अनुभव छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान गर्न सकेमा मुलुक स्रोत साधनमा सम्पन्न हुने बताउने आचार्य राजनीतिक दलकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले गतिलिन नसकेको बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक भागबण्डाको विषय बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ४ दशकदेखि नजिकबाट नियालिरहेका आचार्यसँग पछिल्लो समय बजेटमा देखिएको अन्योल, संघीय बजेटको तर्जुमा र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी निरु आर्यालले गरेको कुराकानी :
चुनावको कारण देखाएर राजनीतिक दलहरूले बजेटको मिति नै सार्ने कसरत गरिरहेका छन् । तपाईंको धारणा के छ ?
राजनीतिक दल र नेताहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मौजा ठानेका छन् । मैले लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गरें । राजनीतिक दलहरूकै कारण कहिले बजेट मंसिरमा, कहिले असोजमा त कहिले साउनमा आयो ।
छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने परिपाटीले अघिल्लो सरकारले गरेका काम अर्को सरकारको पालामा नगर्ने प्रचलन हाबी हुँदै गयो । यतिसम्म कि बजेटलाई दलहरूले केटाकेटीले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तै खेलौना बनाए । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र बजेटको निश्चित समय तोकिनुपर्छ ।
बजेटको क्यालेण्डर आउनुपर्छ भनेर हामीले निक्कै पहल गरेका थियौं । जसको फलस्वरूप संविधानले हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले एउटा सिस्टमको विकास भयो भनेर निजी क्षेत्र भनौं या अर्थिक क्षेत्रसहित बजेटमा चासो दिने सबैमा एक खालको आशा पलाएको थियो । अहिले निर्वाचनको निहुँमा बजेटको मिति सार्ने कुरा आएको छ । त्यो भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमाथिको जगन्य अपराध हो ।
आर्थिक क्रियाकलापमा दलहरूको हस्तक्षेप नहोस् भन्न खोज्नुभएको हो ?
राजनीतिक सवालमा म एउटा भोटर मात्रै हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मैले करिब ४ दशकदेखि नियालिरहेको छु । त्यसैले पनि म भन्छु– निर्वाचन आयोग र सरकारको समझदारी भएर चुनवका लागि कुनै मिति तोक्न सकिन्छ । तर बजेट पर सारेर दलहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि जगन्य अपराध गर्नु भएन । संविधान खेलाँची गर्ने दस्तावेज होइन । बेलायतमा संविधान छैन तर परम्परागत मान्यता चल्दै आएको छ । अमेरिकामा उहिले जारी भएको संविधान जम्मा १५÷१६ पटक मात्रै संशोधन भएको छ ।
घोषणा गरेर १ महिनामै संशोधन हुने कुरा होइन । जतिसुकै राजनीतिक भागबण्डा भए पनि आर्थिक नीतिमाथि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् । सक्नुहुन्छ भने राम्रो नीतिनियम ल्याइदिनस्, आधारशीला बनाइदिनुस् तर काम गर्नेलाई अवरोध नर्गनुस् भन्छु म । तामाकोशी, बुढीगण्डकी, हुलाकी राजमार्गलगायत अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोजनाको काम फटाफट काम गर्ने वातावरण बनाउन पहल गर्नुभयो भने देशको मुहार फेरिन्छ ।
मिति सार्दैमा बजेटको तयारीमा समस्या उत्पन्न त हुँदैन होला नि ?
कुनै पनि हालतमा जेठ १५ को बजेट सार्ने काम गर्नु हँुदैन । अरु कुरामा सम्झौता गर्न सकिन्छ । अन्य कुरामा संशोधनका कुरा आउन सक्छन्, तर दलहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटो दिन र चलायमान गराउन आर्थिक कृयाकलापमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । जस्तो कि अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तर्जुमा गरिरहेको छ ।
सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह तोकेको छ । ७ प्रान्त भनिएको छ । त्यही अनुरूप बजेटको तयारी हुँदैछ । संशोधन भए फेरि त्यो कसरी मिलाउने ? निकासा दिने कार्यक्रम बनाउनेलगायतका कुरामा अन्योल हुन सक्छ । फेरि गञ्जागोल हुन सक्छ ।
पहिलो पटक संघीय बजेट आउँदै छ, यहाँले भनेजस्तै बजेट तर्जुमामा अहिले पनि अन्योल छ ?
अहिले जति पनि विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् ती सबै ७ सय ४४ मै पर्छन् । मेरो विचारमा बजेटको तर्जुमा गर्दा दुई वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो कि ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ठूलो बजेट दिएर केन्द्रले नै हेर्नुपर्छ । अर्को स्थानीय तहलाई पनि संविधानले धेरै अधिकार दिएको छ ।
अब निर्वाचित भएर आउने निकायका प्रतिनिधीले आफ्नो क्षेत्रमा हुने आयोजनाको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने काम गरुन् । अर्को कुरा स्थानीय आयोजनालाई नाम नै किटान गरेर बजेट छुट्याउने काम भयो भने त्यहाँको बजेट अन्य क्षेत्रमा खर्च हुँदैन । पहिलो पटक संघीय बजेट बनाउने चुनौती त छ नै । कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने विषयमा कुनै द्विविधा नलिई संविधानअनुसार नै तय गरिनुपर्छ ।
सरकारले कनिका छरे जसरी खुुद्रे आयोजनामा पैसा छर्ने काम गर्नु हुँदैन । झिनामसिना कार्यक्रमको अधिकार सबै तल्लो तहमा दिनुपर्छ । केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथसाथै जुन आयोजना जुन जिल्लामा वा तहमा पर्छ उसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनेको छ ।
स्थानीय तहका मेयर सवै हुन् गतिलो मान्छे आए भने प्रान्तलाई हल्लाउने क्षमता हुन्छ । स्थानीय तह जति बलियो भयो जनताले त्यहीँबाटै धेरै लाभ लिन सक्छन् । महानगरभन्दा वडाहरू पावरफूल हुन्छन् । सरकारबाट बजेट खर्च भएको छैन अधिकार दिँदा स्थानीय तहले धेरै काम गर्न सक्छन् । स्थानीय तहलाई क्षमता विकासमा लगाउनुपर्छ ।
संघीयतासँगै स्रोत व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रूपमा छ भनिन्छ । संघीयता लागू हुँदा बढ्ने भार हाम्रो स्रोतसाधनले थेग्न सक्छ ?
यो विषयमा केही अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । सरसर्ती हेर्दा अहिलेसम्म नेपालका १५ जिल्लामात्रै आत्मनिर्भर छन् । ३३ वर्षदेखि म ठाउँठाउँमा बसेर नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छु । संघीयता कार्यान्वयनको शुरुका २÷४ वर्ष गा¥हो हुन्छ ।
मेरो परिकल्पनामा के छ भने जुन अहिले ७ सय ४४ तह गठन भएका छन्, ती संवैधानिक निकायमा मात्रै सिमित नभई आर्थिक निकाय पनि बनेर बस्नुपर्छ । हरेक तहमा त्यहाँको स्रोतमा आधारित भएर प्रयोगशाला बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यायलसँग मिलेर शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकियो भने स्रोत जुटाउन खासै समस्या देख्दिनँ । सबैभन्दा ठूलो कुरा कृषिको आधुनिकीकरण नै हो । स्थानीय तहमा किसानका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकियो भने उनीहरूले आफ्नो खेतमा उब्जानी बढाउन सक्छन् ।
कृषिको व्यावसायीकीकरण गर्न त्यहाँका जेटिएहरूले पनि किसानलाई उत्प्रेरणा दिने काम गर्नु जरुरी छ । उदाहरणका लागि हामीकहाँ ४४ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ भनिन्छ, तर देशमा हामीलाई चाहिने काठ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । ९० प्रतिशतको पनि के अर्थ भयो र ? भएका स्रोत साधनको अधिकतम् प्रयोग गर्ने गरी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।
जहाँ जेको सम्भाव्यता छ त्यही कुरालाई प्रमोट गर्नुपर्छ । उद्योग, कृषि, वन, उर्जा, पर्यटनको सम्भाव्यताको कुरा छ त्यहाँका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्न सक्यो भने स्रोत जुटाउन सहज हुन्छ । राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्थानीय तहमा अधिकतम् पूर्वाधार र जनशक्ति खडा गरेर स्रोतको पहिचान गर्न सकेमा निक्कै फड्को मार्न सकिन्छ ।
सँगसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा पनि विवादास्पद कुरा सुनिन थालेका छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ?
कर्मचारीलाई वहुदलीय व्यवस्था आएपछि अति राजनीतिकरण गरियो । हामीकहाँ कस्तो समस्या छ भने जो साँच्चिको श्रमिक हो, उसले ट्रेड युनियन अधिकार पाउँदैन । तर जसले सरकारी जागिर खाएर पेन्सन खान्छ र आरामदायी जिवनयापन गरिरहेको छ उसले अधिकारको वकालत गर्छ । कर्मचारीले डेलिभरी दिनुपर्छ ।
मेरो विचारमा नेपालको प्रशासनिक काम १० प्रतिशत कर्मचारीले चलाएका छन् । प्रशासनको हाकिमहरूका नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु भएन । अहिले देखिएको समस्या कर्मचारीको हो । शुरुको ५ वर्षको समय कर्मचारीको छनोट लोक सेवाले गर्नुपर्छ । किनकी अन्य क्षेत्रमा जे जति राजनीतिकरण भयो भनिएको छ, लोकसेवा आयोगमाथि कसैले औंला उठाउन सकेको छैन ।
आयोगलाई केन्द्रमा राखेर प्रान्तमा पठाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई ५ वर्षसम्म निरन्तर तालिम दिनुपर्छ । हामीकहाँ तालिमको जरुरी छ । कानुनी मात्रै होइन, प्रशासनिक मनोवैज्ञानिक तरिकाले तालिम दिनुपर्छ । संघीयता संस्थागत गर्ने कर्मचारीले नै हो, त्यसैले ५ वर्षमा प्रशासनको खाका कडा हुनुपर्छ ।
नेपालको विकासमा कर्मचारीतन्त्र बाधक हो भन्ने सुनिन्छ, यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
यो आफैंमा खराब होइन, खराब बनाइएको हो । जब–जब हाम्रा संरचनामा राजनीतिक भागबण्डा हुन्छ अनि सबै बिग्रिन्छ । राजनीतिक दलहरूले चाणक्य नीति पढ्नु जरुरी देख्छु म । किनकी सबै दलका नेता कार्यकर्ता नैतिकरूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूलाई सामान्य नियम कानुनबारे अभ्यस्त गराउनुपर्छ ।
दल, सरकार, राज्यबीचको पृथकता के हो त्यसबारे जानकारी हुनैपर्छ । पदमा पुगेपछि आफूभन्दा ठूलो जान्ने सभ्य भएको पाइँदैन । शाखा अधिकृत हुने मान्छे भोलिको सचिव हो । आजको कार्यकर्ता भोलिको प्रधानमन्त्री हो । एउटा कूटनीतिज्ञले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको प्रशिक्षण दिनुपर्छ । दल चलाउन निक्कै गा¥हो छ ।
सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खर्च बढाउन सकेको छैन । यहाँले लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गर्नुभएको छ । खर्च बढ्न नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ ?
खर्चको शैली पुरानै छ । त्योबाहेक अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती क्षमता अभिवृद्धिको हो । २००८ सालको तुलनामा हामीकहाँ जनशक्ति धेरै छ । लोकसेवा आयोगले क्रिम मान्छेहरू छानेर ल्याउँदा बजेट खर्च भएको छैन । लेखा, विकास, अर्थ समिति र महालेखाले कराउँदा खर्च भएको छैन । सेजनले पनि यति धेरै कुरा उठाएको छ । तर खर्च भएको छैन ।
गाउँमा मान्छे नै छैनन्, ओभरसियर छैनन्, इन्जिनियर छैनन् । त्यसैले सरकारले विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका तालिम केन्द्रलाई क्षमता अभिवृद्धिको घनिभूत तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ । यो चालु खर्च यो पुँजीगत खर्च हो, लेखा परीक्षण यसरी गर्ने, राजस्व यसरी उठाउने भन्ने जस्ता तालिम दिनुपर्छ ।
सरकारले उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनेपनि लामो समयदेखि हाम्रो औद्योगिक उत्पादन निरन्तर खस्किदै छ । निजी क्षेत्र पनि उत्पादन छोडेर ब्यापारतिर लागेको अबस्था छ उत्पादन बढाउन के गर्नु पर्ला ?
उत्पादन क्षेत्रमा हामी सधैं पछि छौं । विश्वव्यापीरूपमै विकासको क्रममा कृषि क्षेत्रको अनुपात क्रमशः घटदै जान्छ, उद्योगको बढ्दै जान्छ । त्योभन्दा सेवाको बढ्दै जान्छ ।
कृषि, उद्योग, सेवा यसरी जानुपर्नेमा उद्योग २० वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । यो आफैंमा बिडम्बना हो । राजनीतिक अस्थिरता भनौं या अन्य विभिन्न कारणले यो अवस्था आएको हो । हाम्रै व्यवसायीले उद्योगमा लगानी गरेका छैनन् । व्यवसायीलाई लगाम लगाउने होइन । उनीहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ । व्यापारमा सहजै नाफा कमाउन सकिन्छ ।
उद्योग खोल्न जमिन चाहिन्छ । राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन गएर चन्दा मागेर सताउँछन् । गाउँका चुल्ठेमुन्द्रेहरू त्यतैतिर लाग्छन । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा महंगो भन्सार छ । तयारी वस्तु आयात गर्दा सस्तो हुन आउँछ । प्रतिस्पर्धी हुन सकिँदैन भने उत्पादन गर्नुको के अर्थ भयो ? यसका लागि उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ नै ।
सरकारले पहिलो पटक आर्थिक नीतिको तर्जुमा गर्दैछ, अर्थशास्त्रीको हैसियतमा यहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ । यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
२००८ सालदेखि बजेट र २०१३ सालदेखि योजनाहरू आउन शुरु भएको हो । पछिल्लो समयमा संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थब्यवस्था भनेर एउटा बाटो देखाएको छ । त्यहाँ धेरै आर्थिक अधिकार दिइएको छ । त्यसैलाई मूर्त रूप दिन सरकार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा संघीय ढाँचामा आर्थिक नीतिको तर्जुमा भइरहेको छ ।
यो नीति तर्जुमा गर्न विज्ञहरूको प्राविधिक कमिटी पनि छ । उसले संघीय नेपालका लागि आर्थिक नीतिको तर्जुमाका लागि ७ वटै प्रान्तमा पुगेर करिव १ हजार बढी विभिन्न क्षेत्रका पेशाकर्मी विशेषज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गरिसकिएको छ । अहिले ती सुझावलाई मूर्तरूप दिने काम भइरहेको छ । उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिलाई बुझाउने भनिएको छ ।
उक्त नीतिबाट जनताले के अपेक्षा गर्न सक्छन् ?
यो नीति तर्जुमा गर्न सबैसँग राय सुझाव मागिएको छ । यो आर्थिक विकासको सर्वदलीय दस्तावेज हुने आशा गरिरहेका छौं । जस्तो कि हालै मात्र सरकारको त्रिवर्षिय योजना आएको छ । सरकार भनौं या अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउन तल्लित छ । सबै दलबाट आएका सुझाव समावेश भएका छन् । अहिलेसम्म सरकार फेरिएसँगै बजेट फेर्नुपर्ने समस्या छ ।
एउटा सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम नयाँ सरकारले पालना नगर्ने तर अर्थ मन्त्रालय जहिले पनि मारमा परिरहने अवस्था एकतिर छ भने दलहरूको भागबण्डाले काम नगर्दा खर्च नहुने, त्यसको अपजस जहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले खेप्नुपर्ने अवस्था छ । यसको अन्य हुन सक्छ । यो नीतिको तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुझाव संकलन गर्ने काम लगभग सकिएको छ । उक्त समितिले निर्देशक समितिलाई बुझाउँछ ।
त्यहाँबाट अर्थमन्त्रीकहाँ पुग्छ र अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लाने र पारित गर्ने योजना छ । यसमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र योजना आयोगका सचिव छन् । अर्थमन्त्रीले नै सम्मृद्ध नेपालको नारासहित नेपालकै खाका बनाउनु भन्नुभएको छ । कृषि, उद्योग र सेवाको संघीयतामा आधारशीला खोज्ने काम भएको छ ।
तपाईं लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा बसेर काम गर्नुभयो । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पनि अब परिमार्जन गर्ने बेला भएन ?
सरकारी स्वामित्वका संस्थानमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक सर्वोत्कृष्ट छ । अब दोस्रो पुस्ताको आर्किटेक्चर चाहिन्छ । मैले विभिन्न फोरममा पनि डिजिटल आर्किटेक्चर चाहिन्छ भन्दै आएको छु ।
नोट बोकेर स्कूल धाउनुपर्ने, किनमेलमा जानुपर्ने, बैंक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्र्छ । आफ्नो कारोबार कहाँ, के र कसरी भयो भन्ने कुरा घरमै बसेर हेर्ने जमाना आइसक्यो । प्रविधिमा संसारले फड्को मारिसकेको छ । अबको १० वर्षपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो अनिवार्य छ ।
निर्वाचन बजेट अर्थतन्त्र